Dheer 4 Meelaha Soodhaweynta Khaaska ah ee gaarka loo leeyahay
Abuuri oo marto qolkaaga wada sheekeysiga gaarka kuu ah
Qolalka sheekeysiga bilaashka ah waxay bixiyaan fursado fiican si ay ula sheekaystaan ​​asxaabta iyo qoyska si gaar ah Haddii aad rabto qolka sheekeysiga leh awoodda qoraalka ama webcam chat , dhammaan boggaani waxay si buuxda u taageeraan fiidiyoowga iyo qoraalka labadaba.
Maxaa ka dhigaya goobaha lagu sheekeysto ee ka duwan qolalka kale ee lagu sheekeysto waa in ay si gaar ah loogu talagalay dalbashada, hal-hal ama koox koox ku sheekeysta dadka aad taqaan. Markaad labadiinaba xisaab samaysato, waxaad si kali ah ula sheekeysan kartaan midba midka kale, badiyaa kumbuyuutarka, telefoonka, ama kiniinka .
Badi bixiyeyaasha qolalka sheekeysiga gaarka ah ee bilaashka ah badankoodu waxay u baahan yihiin magac ama shaashad ka hor intaadan isticmaalin Dhamaan kuwa aan ku liisgareyno halkan waa gebi ahaanba bilaash ah in la isticmaalo.
Waalidiinta: Marwalba wax baro naftaada iyo caruurta khatarta ilmo-dhaliyeyaasha ilmo-dhalinta ee internetka ah . Baro sida loo kormeero waxqabadyada ubadkaaga ee internetka (on smartphones, sidoo kale!), Xannibaan gelitaanka shabakadaha internetka , ama jooji webcam haddii aad ka welwelsan tahay cunugaaga inuu helo fursadahaas iyo goobaha kale ee la midka ah.
Skype waa mid aad u caan ah, waana mid aad u caan ah oo dunida oo idil ku shaqeeya oo shaqeeya si aan caadi aheyn oo loogu talagalay dhismaha qolalka wada sheekeysiga gaarka ah ee u dhaxeeya laba ama in ka badan.
Waxaad isticmaali kartaa Skype si aad u soo dirto farriimaha qoraalka ah, emojis, GIFs, sawirada, iyo xitaa daawashada video iyo / ama codka dadka kale ee qolka wada sheekeysiga.
Maxaa ka dhigaya Skype ka duwan mid ka mid ah codsiga wicitaanka caadiga ah waa inaad si fudud uula hadli kartid waqti isku mid ah. Dhigista fiidiyowga oo meel dhigo si aad u aragto daaqada fariinta si aad u dirto qoraalada iyo sawirada, adiguna waxaad leedahay qolkaaga gaarka ah.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo loogu talagalay isticmaalka Skype sida qolal sheekeysi oo bilaash ah. Mid ka mid ah waa dalbasho meesha aad si fudud u qorto magaca isticmaalaha ka dibna ka bilow qolka si aad ula wadaagto xiriirka gaarka ah ee qof kasta, iyo kan kale waa inuu abuuro koontada Skype isla markaana u soo dejiso barnaamijka taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga.
Fiiro gaar ah: Isticmaalka Skype habka ugu horreeya waa hab weyn oo loo sameeyn karo qolal lagu sheekeysto oo ammaan ah oo u dhexeeya laba qof, gaar ahaan carruurta. Marka abuuruhu uu sameeyo qolka oo uu wadaago xiriirka, iyo dadka qaata inay bilaabaan hadalka, maamulku wuxuu awood u yeelan karaa URL-ka la wadaago si uusan cid kale ugu biirin wadahadalka. More »
Fiidiyow kale oo bilaash ah oo bilaash ah oo bilaash ah iyo qolka lagu sheekeysto qoraalka ayaa la yiraa appear.in Wuxuu ka shaqeeyaa kombiyuutarkaaga iyo qalabka mobile-ka wuxuuna ka caawiyaa ilaa afar qof qol isku mid ah.
Waa kuwan sida ay u shaqeyneyso: dooro magaca qolka lagu sheekeysto oo ku xir webkamaddaada. Xilli daqiiqo ka dib, kaliya uqeyb geli URL adiga qof kasta waxayna si toos ah ugu boodi karaan sheeko video ah.
appear.in sidoo kale waxay taageertaa fariin qoraal ah oo joogto ah, xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad sidaa sameysid markaad heeseyso fiidiyow. Muuqaal kale oo wanaagsan oo lagu taageeray qolkan wada sheekeysiga ayaa ah wadaag sawir, laakiin waxaad u baahan tahay inaad barnaamijka ku rakibto si taas loo sameeyo.
Fiiro: Haddii aad ku qorto koonto, taas oo si buuxda loo dooran karo, waxaad furi kartaa waxyaabo kale sida awoodda aad ku badbaadin karto magaca qolka si uusan cid kale u isticmaalin markaad baxayso. Waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad qolka ku xirto si markaa dadka qaata ay khasab ku noqdaan in ay "garaacaan" (codsi helitaan) si ay u helaan. »
Google ayaa bedeshay barnaamijkeeda sheekaysiga ah ee lagu magacaabo Talk, ama Gtalk, oo leh Google Hangouts .
Hangouts waxay isku xirtaa qalabka isgaarsiinta Google, sida Google+ iyo Gmail. Isticmaalayaasha waxay samayn karaan oo heli karaan wicitaannada codka, waxay qabtaan kulamo fiidiyow ah, sheeko qoraal ah, oo wicitaano telefoon oo bilaash ah u diraya taleefan kasta oo adduunka ah iyo qiimaha jaban ee VoIP.
Google Hangouts wuxuu ka shaqeeyaa kombiyuutarkaaga, casrigaaga, iyo kiniiniga. Waxaad ka soo dejisan kartaa app halkan.
Talo: Waxaa jira tiro ka mid ah waxyaabo qarsoon oo qarsoon oo lagu ciyaaro oo leh Google Hangouts. More »
TinyChat waa wax ka badan adeega qolka wada sheekeysiga gaarka loo leeyahay tan iyo markii uu martigeliyay qolal badan oo la heli karo oo loogu talagalay qof kasta inuu ku biiro. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin muuqaal Room Rooma ah oo aad hadda isticmaali kartid xittaa sameynta koontada isticmaalaha.
Tilmaamkan gaarka ah ee TinyChat ayaa kuu ogolaanaya inaad dhisatid qolkaaga wada sheekeysiga gaarka ah. Qof kasta oo doonaya inuu ku biiro qolkaaga wuxuu u baahan yahay inuu ogaado cinwaanka saxda ah ee uu ku heli karo, taas oo TinyChat isbeddeleyso mar kasta oo aad sameysid qol cusub.
TinyChat waxay taageertaa video iyo qoraalka labadaba. Markaad ku biirto, waxaad dooran kartaa in aad wadaagto fiidiyahaaga, codkaaga, ama labadaba. Sida qolalka ugu da'da badan ee lagu sheekeysto, waad qori kartaa oo isticmaali kartaa fiidiyowga si siman.
TinyChat ayaa sidoo kale si toos ah u soo bandhigi kartaa sheekooyinka YouTube si toos ah wada hadalka si marka qolada wada sheekeysiga ay ku daawadaan isla filinka isla waqti isku mid ah.
Adeeggan qolka wada sheekeysiga gaarka ah ee bilaashka ah waxaa loo isticmaali karaa telefoonkaaga, kiniinka, iyo kombiyuutarka. More »
Soo booqo Chatroulette cusub
Waa maxay macnaha dhabta ah ee macalimiinta?
Sida loo Aqoonsado Rinjiyadaha Gawaarida Gawaadhida ee Dhammaadka
Hore Hotmail Email ugu dir Xisaab kala duwan
Dib-u-eegidda Xawaaraha Comcast / XFINITY
IPad-yada Talo-Fiican Qodob kasta waa inuu ogyahay
Habka Schneier (Habka Nadiifinta Macluumaadka)
Scribe 1.88 - Barnaamijka Emailka
Sida loo soo saaro fariimaha qoraalka Faylka Evolution
Ciyaaraha 'Minecraft': Sheekada Sheekada: Dib u eegida 5aad!
Pac-Man - Ciyaarta ugu Muhiimka ah ee Wakhtiga oo dhan
Raadi Instagram oo ku sii socota
Xilliyaadka ugu dambeeya ee hadhuudhka ah ee dhab ahaantii feker ahaan leh
Ciyaaraha Arcade ee ugu wanaagsan 1981
Waa maxay Shirkadda Sim Wireless Network?
Sida loo Isticmaalo Buugaagta iPad-ka
Sidee loo wareejiyaa muusikada "Stick Memory Stick"
Waxa aad sameyneyso ka hor intaadan iibin BlackBerry
Sida loo Xaqiijiyo Mfplat.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
10ka Ciyaartood ee ugu Fiican ee Laba Sano